ချိန်းဆိုမှု / ချိန်းဆိုချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်း - Falls Church Healthcare Center
ဤပုံစံသည်ရက်ချိန်းယူပြီးဖြစ်သောလူနာများအတွက်ဖြစ်သည် အတည်ပြုပြောကြား ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်အတူဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်။ သင်ရက်ချိန်းယူရန်လိုအပ်နေပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသုံးပါ ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုပါ.
ယင်းကို Select လုပ်ပါ မီးယပ်ဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု or ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှု သင့်တွင်ရှိပြီးသားချိန်းဆိုမှု
ချိန်းဆိုမှုအသစ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုရန်သင့်ကို (သင်နှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်) သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - ချိန်းဆိုမှုများအားလုံးပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ကျန်းမာရေးပညာပေးကအတည်ပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်သင့်အား ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်စောလျှင်စွာစီစဉ်ထားသည့်ချိန်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ 703-532-2500.
သင်၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောတောင်းဆိုချက်ကိုတင်ပြပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ သင်၏လူနာပုံစံများကိုအွန်လိုင်းဖြည့်စွက်ပါ သင့်ချိန်းဆိုမှုမပြုမီ
မေးခွန်းများ? ခေါ်ပါ 703-532-2500 သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ပုံစံကိုကူညီဘို့။
ဆက်သွယ်ရန်၏ ဦး စားပေးနည်းလမ်း*
ငါတို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောရတာအဆင်ပြေသလား။*
ဘယ်ဘာသာစကား (များ) ကိုပြောချင်ပါသလဲ။
(ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကစပိန်၊ ဟိန္ဒူနှင့်နီပါလီစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ သင့်ဘာသာစကားနှင့်မကိုက်ညီပါကအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘာသာပြန်သူကိုဖုန်းဖြင့်သင်တောင်းခံနိုင်သည်။ )
Telehealth နှင့် In-Person နှစ် ဦး စလုံး
သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုကိုမည်သည့်နေ့တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသနည်း။*
သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုကိုပြန်လည်သတ်မှတ်လိုပါသလား။*
ကျွန်ုပ် Telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်
သင်၏ Telehealth ရက်ချိန်းအတွက်သင်နှစ်သက်သောနေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။
တစ်ခုရွေးပါကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး - ၉ ပတ်အထိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - နိုးပါ - ၁၂ ပတ်အထိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ - အိပ်ပျော် - 15 ရက်အထိကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ - ဘယ်အမျိုးအစားကိုငါမသိသေးဘူးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းအကဲဖြတ်ခြင်းကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်ဝန်ရွေးချယ်စရာတိုင်ပင်ခြင်း
တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားနေ့ရန်
တစ်ခုရွေးပါထက်နည်း 13 ပတ်13 ရက်သတ္တပတ်14 - 15 ရက်သတ္တပတ်
ငါတို့တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ဤတွက်ချက်မှုကိုတွက်နိုင်သည် ကိုယ်ဝန်တွက်စက်. (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
တစ်ခုရွေးပါတနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်း (ဆေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာနိုးသာ)အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကြာသပတေးနေ့နံနက် (လုပ်ငန်းစဉ်နိုးကြားမှုအတွက်သာ)ကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲပိုင်း (ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်သာအိပ်စက်ခြင်း)သောကြာနေ့နေ့လည်ခင်းစနေနေ့အစောပိုင်းနံနက်
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စီစဉ်ထားသောချိန်းဆိုမှုကိုပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါ မဟုတ် သင်၏မူလချိန်းဆိုမှုအချိန်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဟူသောအတည်ပြုချက်။ ပြန်လည်နေရာချထားမှုကိုအတည်ပြုရန်အတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင့်အားဆက်သွယ်လိမ့်မည်။